ကလိုစေးထူး: လူငယ်တဦးရဲ့ မှတ်တမ်းမဲ့ မှတ်တမ်း…(၅)
မနက်စောစောစီးစီး ဒါကို ဖတ်လိုက်မိသွားတယ်။
စိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာ။ ဒီစာကိုဖတ်ရင် ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ မဖတ်ဘဲလည်းမနေနိုင်။ တပိုင်းတပိုင်း ဖြတ်ဖြတ်ထားတော့ ဖတ်ရတာ ဆန့်တငံ့ငံ့ မို့ ဒီစာမြင်ရင်ကို အမြန်ဖတ်ချင်နေမိတယ်။ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ကိုယ်တိုင်လည်း မွန်းကျပ်လာသလို …ခေါင်းတွေမူးလာသလိုပဲ။ ဖတ်နေတုန်းတလျှောက် အသက်တောင် ၀၀ရှူမိရဲ့လားမသိ။ ဖတ်ပြီးတော့မှ ရင်ထဲမှာ ကျပ်ဆို့ဆို့ကြီးဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာရှေ့က ခဏမျက်နှာလွှဲလို့ အသက်၀၀ ရှူမိတယ်။
Jul 27, 2007, 9:15:00 PM
ကိုဝင်းနိုင်ဦးကို လေးစားပါတယ်။ ကျနော်လည်း ထောက်လှမ်းရေး (၆) ကို ရောက်ခဲ့ပေမယ့် သူ့လိုပြန်ရေးပြဖို့ကျတော့ လွယ်ပါ့မလားလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။
Jul 29, 2007, 2:25:00 AM
အဲ.. ဘာစကားပြောလိုက်တာလဲလို့.. သိချင်လိုက်တာ ။
ကျမကတော့ အဲလို ထောက်လှမ်းရေးစခန်းတွေကနေ ထွက်လာနိုင်သူမှန်သမျှကို လေးစားပါတယ်ရှင် ။
Jul 29, 2007, 12:10:00 PM
I go to ur blog daily to see the new post. I always feel unbreathable whenever I read it. The experience too bitter to describe!!! I can't help reading that post. I also want Ko Thet Oo to write down his experience under MI. We can know such things only when our brothers, like u, share it.
Jul 29, 2007, 12:21:00 PM